ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
“လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ လွတ်လပ်ခွင့်၊ တခြား နိုင်ငံသားတွေ လွတ်လပ်ခွင့် ရယ်လို့ ခွဲပြီး မမြင်သင့်ပါဘူး။ အန်တီတို့က စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လွတ်လပ်ခွင့်မျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေအတွက် လိုချင်ပါတယ်။ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အဆင့် မရှိသေးဘူးလို့ ဥပဒေပညာရှင်တွေက မှတ်ချက်ချတာကို အခြေခံပြီး အန်တီတို့ လေ့လာသုံးသပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါတယ်” ဆိုပြီး အစိုးရက အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နဲ့ စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြခွင့်ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သောတရှင်တဦးရဲ့ အမေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံက မယုမွန်အိ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မခိုင်ခိုင်နဲ့ ကိုဝဏ္ဏရှင်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံက မခင်ကြူကြူထွန်းနဲ့ ကိုခိုင်းလင်းတို့ ၅ ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သောတရှင်တဦးရဲ့ မေးခွန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “အကျဉ်းထောင်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ပံ့ပိုးကူညီနေတဲ့ NLD လူမှု အထောက်အကူပြုအဖွဲ့က ရထားသမျှ စာရင်းတွေအရ ဆိုရင် အခုအခါမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၅၉၁) ယောက်ရှိပါတယ်။ NLD စာရင်းထဲ မပါလိုက်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ သေချာအောင် ထပ်ပြီး စိစစ်နေပါတယ်။ စိစစ်ပြီး အကျဉ်းထောင်တွေမှာ ပြင်ပစာရင်းထဲ ပါဝင်တဲ့ အကျဉ်းသားတွေအချို့ လွတ်မြောက်ပြီး ဖြစ်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျဉ်းထောင် အားလုံးကိုတော့ စိစစ်လို့ မပြီးသေးပါဘူး” လို့ ဖြေကြားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ဒေါ်အေမီအုန်းနဲ့ မချောစုအောင်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံက ကိုထိန်လင်း၊ ကိုဇေယျာဟိန်းနဲ့ မသူသူဝင်းတို့ ၅ ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
“၁၉၉ဝ ခုနှစ်တုန်းက တောင်အာဖရိက အခြေအနေကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ ၁၉၉ဝ ကနေ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေး တလျှောက် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ အခက်အခဲတွေကို နှစ်ဖက်စလုံးက ဇွဲရှိရှိနဲ့ ကြိုးစားပမ်းစား ကျော်လွှားခဲ့ရတဲ့ တောင်အာဖရိကကို သင်ခန်းစာယူပြီး အန်တီတို့လည်း အများပြည်သူ မျှော်လင့်နေတဲ့ အခြေနေတခု ဖြစ်ပေါ်လာအောင် လုပ်ဆောင်ကြရမှာပါ” လို့ လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အနေအထားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက ကိုအောင်၊ မလေးရှားက မယုဇနခင်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံက မချိုဇင်လတ်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ကိုဝင်းဇော်နဲ့ ကိုရန်ပိုင်တို့ ၅ ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီတပတ် ပြန်လည်ဖြေကြားထားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
`အခုထိတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး သင်တန်းတွေ ပေးတာဟာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရယ် ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းတွေရယ် တချို့လူထု အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေရယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရ ကျောင်းတွေမှာတော့ သင်ရိုးညွှန်းတန်းထဲမှာ ပါပေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကတော့ ပြည့်စုံတယ်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ Website ကနေ NLD ပါတီဝင်သစ် လျှောက်ထားနိုင်ရေး ကိစ္စကို ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်။ အမေ့ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်မှု အရှိဆုံး အချိန်တွေထဲမှာတော့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ ဘဝမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရွှင်ရွှွင်လန်းလန်း အပြစ်ကင်းစွာ နေခဲ့ရတဲ့ ကာလတွေ ဖြစ်ပါတယ်` လို့ သောတရှင် တစ်ဦးရဲ့ မေးမြန်းချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
ဒီတပတ်မှာတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံက ကိုအေးနိုင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုအောင်စိုးမိုးနဲ့ မခင်ခင်ဦး၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံက ကိုထိန်လင်းနဲ့ မချိုဇင်လတ်တို့ (၅) ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
"သမ္မတ အိုဘားမားက ပြောပုံဆိုပုံ ခင်မင်စရာ ကောင်းတယ်လို့တော့ ပြောချင်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ချမှတ်စဉ် ကတည်းက သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ပြည့်စုံတဲ့အခါမှာ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖယ်ရှားပေးမှာ ပါလို့ မကြာခဏ ပြောထားတဲ့အတိုင်း အမေရိကန်အစိုးရက လုပ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်" အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့ တယ်လီဖုန်းကို လက်ခံပြောဆိုခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ ဆက်နွှယ်ပြီး မေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားသွားတာပါ။
ဒီတပတ်မှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ မမီမီထင်ကျော်နဲ့ ကိုဗဟိန်းတင့်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့က ကိုထိန်လင်းနဲ့ မခင်ကြူကြူထွန်း ၊ UAE နိုင်ငံ ဒူဘိုင်းမြို့က ကိုဘိုသိန်းတို့ (၅) ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
အမှန်တရားဖက်က ရပ်တည်ပေးကြဖို့ မတရားတာ တွေ့ရင် လက်ပိုက် ကြည့်မနေကြဖို့ ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြောကြားချက်ကို လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုကိစ္စက စပြီး ကျင့်ကြံသင့်ပါသလဲ ဆိုတဲ့ သောတရှင် တဦးရဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က `ဟိုးအရင် အန်တီ နိုင်ငံရေးထဲ မဝင်ခင်က အဖြစ်အပျက်လေးတခု ပြောပြချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်က အစိုးရ ကုန်တိုက် တခုမှာ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အတွက် ပိုက်ဆံရှင်းဖို့ တန်းစီနေတုန်း နိုင်ငံခြားသား တယောက်က အားလုံးကို ကျော်တက်ပြီး ပိုက်ဆံရှင်းပါတယ်။ အန်တီ့ရှေ့က လူတွေရော နောက်ကလူတွေရော ဘာတခွန်းမှ မပြောဘူး။ အန်တီကတော့ အခြားသူတွေ လက်ခံတာနဲ့ပဲ ကိုယ်တိုင်က လက်ခံစရာ အကြောင်း မရှိဘူးလို့ ယုံကြည်တာကြောင့် ဘာဖြစ်လို့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို ကျော်တက်ခွင့် ပေးခဲ့သလဲလို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ အရောင်းစာရေး အမျိုးသမီးကတော့ ဆင်ခြေတွေ အမျိုးမျိုးပေးပေမယ့် ရှိုးတိုးရှန့်တန့် တော့ တော်တော် ဖြစ်သွားပါတယ်။ တချို့က အန်တီ့ကို စွာတယ်လို့ ထင်ကြမလား မသိပါဘူး။ အန်တီကတော့ ဒီလို မတရား သဖြင့် အခွင့်အရေး ယူတာကို မကြိုက်လို့ ပြောလိုက်တာပါ။ ဒါကိုသဘောကျသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော မတရားတာ လုပ်တိုင်း ငြိမ်ခံစရာ မလိုဘူးလို့ လက်တွေ့ကျကျ လုပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ။်` လို့ ဖြေကြားသွားတာပါ။ ဒီတပတ်မှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုအာကာနဲ့ ကိုမောင်သန့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံက ကိုပေတိုးနဲ့ မဖြူဖြူ၊ မန္တလေးမြို့ ကိုကျော်စည်သူတို့ (၅) ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က `နိုဝင်ဘာလ(၁၈)ရက်နေ့မှာ တတိုင်းပြည်လုံးက NLD ဗဟို ကော်မတီဝင်တွေကို ဖိတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီ အစည်းအဝေးမှာ ပါတီရဲ့ အနာဂတ် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆုံးဖြတ်မှာပါ။ ရပ်ကျေးနဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ NLD ရုံးတွေ မရှိတာလည်း ကြာပြီး ညီလာခံတွေလည်း မလုပ်နိုင်တာကြောင့် ဗဟို ကော်မတီဝင်တွေ ကနေ တဆင့် အောက်ခြေ NLD တွေရဲ့ သဘောထားတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်` လို့ NLD ပါတီက နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံပြန်တင်ရေး ကိစ္စမှာ အောက်ခြေ ပါတီဝင်ထုရဲ့ သဘောထားကိုရော ထည့်စဉ်းစားမှာလား ဆိုတဲ့ သောတရှင်တဦးရဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့က ကိုကျော်အောင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ဒေါ်သန်းသန်းအေးနဲ့ ကိုအောင်လင်းနိုင် ရန်ကုန်မြို့က မထွေးထွေးနဲ့ မနန္ဒာမင်းတို့ (၅) ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထား ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
`နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်တွေ တရားဝင်ထွက်ပေါ်လာပြီးမှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် မှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေးကို ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေအရ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနည်းဆုံး မဲဆန္ဒနယ် (၃) နယ်မှာ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဝင်ပြီးတော့ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ်လို့ ပါတယ် ဆိုတာကိုလည်း ကြားရပါတယ်။ ဒီတော့ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိစ္စ ဆုံးဖြတ်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာပဲ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကိစ္စကိုလည်း ပူးတွဲဆုံးဖြတ်မှာပါ' လို့ NLD ပါတီက နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံ ပြန်တင်မှာလားဆိုတဲ့ သောတရှင်တစ်ဦးရဲ့ မေးခွန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့က ကိုဇော်မင်းလတ်၊ လှည်းကူးမြို့က ကိုမောင်မောင်ကျော်၊ ကျောက်ဆည်မြို့က ကိုမိုးသီး တို့နဲ့အတူ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ဦးအောင်သက်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက မသန္တာအောင်တို့ (၅) ဦး ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
`ဒုတိယပင်လုံဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်ထောင်စုလိုအပ်ချက် တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခြား ဘယ်လို ကိစ္စတွေပဲ ရှိနေရှိနေ ဒီလိုအပ်ချက်ကို လက်လွှတ်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စဉ်းစားစရာတွေက အတော်များနေတာကြောင့် နှောင့်နှေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်’ လို့ ဒုတိယ ပင်လုံ ညီလာခံ ခေါ်ယူရေး အသံတွေ ပြန်လည် တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သောတရှင်တစ်ဦးရဲ့မေးခွန်းအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားသွားတာပါ။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အိုင်အိုဝါပြည်နယ်က ကိုဇော်မျိုးလွင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုထွန်းထွန်းနိုင်၊ ဦးစိန်နဲ့ မနန်းဆိုင်ဟောင် တို့အပြင် စင်္ကာပူနိုင်ငံက မကစ်တီအေးမာ တို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြား ထားပါတယ်။
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်)
အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
“ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူတွေ အားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံရေး အကြံပေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဦးကိုကိုလှိုင်က နောက်ထပ်လွှတ်ဖို့ ရှိသေးတယ်လို့ ပြောထားတာမို့ စောင့်ကြည့်ရ ပါလိမ့်မယ်။ စေတနာမှန်နဲ့ လုပ်ပေးတယ်၊ မပေးဘူး ဆိုတာကိုတော့ အချိန်တန်ရင် အဖြေပေါ်လာမှာပါ” လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွတ်မြောက်လာသူတွေ ထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ နည်းနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သောတရှင်တစ်ဦးရဲ့ မေးခွန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ကိုကျော်လင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ကိုနိုင်နိုင်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဦးထွန်းထွန်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံက မနှင်းယုလွင် နဲ့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံက မထိုက်ထိုက်အောင် တို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားထားပါတယ်။
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်)
အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
‘အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို စတင် ဖွဲ့စည်းစဉ် ကတည်းက ဆွေးနွေးရေး လမ်းစဉ်မူဝါဒကို ကိုင်စွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးရေးဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ထင်ရင် ဒီမူဝါဒကို ကိုင်စွဲခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆွေးနွေးမှုတွေဟာ အချိန်အကန့်အသတ် မရှိဘဲ ဆွဲနေလို့တော့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ ကျမလည်း လက်ခံပါတယ်။ လမ်းတစ်လမ်း ပိတ်နေရင် နောက်လမ်းတစ်လမ်းရှာပြီး ဆက်တက်မယ်လို့ ကျမ အစကတည်းက ပြောပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လမ်းကို ရွေးမယ် ဆိုတာကတော့ အချိန်အခါ အခြေအနေအရ ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်’ လို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ ဦးစီးတဲ့ အစိုးရ အသစ်အပေါ် အယုံအကြည် နည်းနေတဲ့ သောတရှင်တစ်ဦးရဲ့ မေးခွန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားလိုက်တာပါ။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ဦးပြည်သိမ်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံက ဦးညွန်းလှနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဖြစ်ကြတဲ့ ကိုရဲမင်းထွန်း၊ ဦးခိုင်စိုးနဲ့ မန်းသောင်းတင်တို့ (၅)ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားထားပါတယ်။
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်)
အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
“ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့် ကိစ္စတွေကို အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေး သဘောတူခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း တစ်ခုထဲတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက် လို့တော့ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အမြင် အကြံဉာဏ်ကို နားထောင်ပြီး ဘယ်လို ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာ ဆင်ခြင်ကြလိမ့် မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကတော့ လုပ်ငန်း အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီး လှုပ်ရှားကြမှာကို ခန့်မှန်းလို့ ရပါတယ်”လို့ ယာယီ ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း တစ်ခုထဲသာမက အဲဒီဒေသတဝိုက်က ရေကာတာ စီမံကိန်းတွေပါ ရပ်တန့်ဖို့ ရှိနိုင်ပါသလားဆိုတဲ့ သောတရှင် တစ်ဦးရဲ့အမေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြား ခဲ့တာပါ။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ရန်ကုန်မြို့က ကိုဝဏ္ဏမောင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံက ကိုစိုင်းစိုင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ဖြစ်ကြတဲ့ ကိုအောင်ဇော်ဦးနဲ့ ကိုထွန်းဝေ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကိုငြိမ်းချမ်းတို့ (၅)ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားတားပါတယ်။
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အောက်တိုဘာ ၇ ရက်)
စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
“ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်တဲ့ အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေကို လျှစ်လျူမရှုဘဲ တိုင်းပြည်အကျိုး မျှော်ကိုးပြီး တာဝန်သိသိ လုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်မှပဲ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူအကြား ယုံကြည်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး နိုင်ငံအတွက် တကယ် အကျိုးဖြစ်စေမယ့် အလုပ်တွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်”
မြစ်ဆုံ ရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့် တရုတ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက် ရောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်နေတဲ့ သောတရှင်တဦးရဲ့ အမေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားထားတာပါ။
ဒီတပတ်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့က ကိုဘိုဘိုဇင်၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ကိုသားကိုဦး၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံက ဦးမောင်လတ်နဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မဝေဝေနဲ့ မထွေး တို့ (၅) ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
`အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေပြီ ဆိုတာက လမ်းစမြင်နေရပြီလို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဆက်လျှောက်လှမ်းဖို့ကလည်း ရှိသေးတယ်လေ။ ဘယ်လိုပုံနဲ့ ဘယ်လောက်မြန်မြန် သွားမယ်ဆိုတာကို မြင်နိုင်လာမှပဲ ခရီးဘယ်လောက် ရှည်မယ် ဆိုတာကို ခန့်မှန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အမြန်ဆုံး ပြည့်နိုင်ဖို့တော့ ကြိုးစားပါမယ်။`လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ပြောကြားခဲ့တဲ့ စကားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်ပြီး ရှင်းပြသွားတာပါ။
ဒီတပတ်မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မမွှေးသူဇာ ကျော်ထွန်း၊ ကိုမျိုးဝင်း၊ နော်အိုးရှင်းရီနီ နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ဦးလှိုင်အေး၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံက မအိရွှေဇင်တို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်)
စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
“လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရယ်လို့ ဖွဲ့စည်းတာဟာ ကောင်းပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်နေကြ တာကိုလည်း ကြားရပါတယ်။ ယခင်က ဘယ်လို အလုပ်တာဝန်တွေပဲ ထမ်းဆောင်ခဲ့ ထမ်းဆောင်ခဲ့ အဓိက ကျတာက အခုအခါမှာ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ဘယ့်လောက် သတ္တိရှိရှိ တာဝန်သိသိနဲ့ ကာကွယ် ပေးမလဲဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ၊ ကော်မရှင်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးဖို့ကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ပိုင်ခွင့် မပေးရင် ကော်မရှင် ကလည်း ဘာမှ မလုပ်နိုင် ဖြစ်ပြီးတော့ ဖွ့ဲလိုက်တာဟာ မဖွဲ့တာထက် တောင်မှ အပြစ်တင်စရာ ဝေဖန်စရာ ကိန်းဆိုက် နိုင်ပါတယ်”လို့ အစိုးရက မကြာသေးမီကမှ ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့က ကိုလူမင်း၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံက မခင်ဖြူဖြူထွန်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံက မမိုးစန္ဒာ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံက မကြည်ပြာနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကိုစိုးနိုင်တို့ (၅)ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည်ဖြေကြား ထားပါတယ်။
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်)
စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
"အမေကတော့ အမေ့ကိုယ်အမေ အသုံးချခံရတယ်လို့ မမြင်ပါဘူး။ ပူးတွဲပြီး လုပ်ဆောင်နေတယ် လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ တကယ်ပဲ အသုံးချ ခံရတယ် ဆိုရင်တောင်မှ တိုင်းပြည်အတွက် အသုံးချခံရတယ် ဆိုလို့ရှိရင် မနှစ်မြို့စရာ မရှိပါဘူး ယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲ ဆက်လုပ် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်"လို့ တိုင်းပြည် ကောင်းစားရေး အတွက် အစိုးရရဲ့ အသုံးချခံ ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ် ပူပန်ခြင်း မရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြား လိုက်ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ ဗြိတိန်နိုင်ငံက မချိုဇင်လတ်နဲ့ မသက်အိန္ဒြေဦး၊ ထိုင်းနိုင်ငံက ဦးမောင်မောင်ခင် ၊ နယ်သာလန်က ကိုမင်းမင်း ၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုအောင်ကိုကိုလွင်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့က စိုင်းအောင်ဘတို့ (၆) ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြား ထားပါတယ်။
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (စက်တင်ဘာ ၉ ရက်)
စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
“ကွဲတယ်ပြဲတယ် ဆိုတာ မနာလိုစိတ်ကြောင့် ဖြစ်တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ စိတ်လုံခြုံမှုနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပြည့်ဝတဲ့ သူတွေဟာ အခြားသူတွေကို မနာလိုမှု ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု၊ စိတ်လုံခြုံမှု ရှိဖို့က လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို တန်ဖိုးထားပြီး ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပုံတွေ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် မွေးကတည်းက လုပ်ယူရမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့အတွေးအခေါ်ကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မလွင်မာအေး၊ ကိုဇော်ဝင်း (နယူးယောက်)၊ မသီတာနိုင် (မေရီလန်း)၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့က မသူသူဝင်းနဲ့ မနီလာအောင်တို့် ၅ ဦးက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး၊ ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ညီညွတ်ရေးမရှိတဲ့ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိစ္စ စတာတွေ မေးမြန်းထားတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (စက်တင်ဘာ ၂ ရက်)
သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
`နိုင်ငံကောင်းကျိုးအတွက် ဘာပဲလုပ်လုပ် တိုင်းရင်းသားတွေကို ချန်ခဲ့ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အမျိုးသား ရင်ကြား စေ့ရေးဟာ ကျမတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက် အဖြစ်ရှိနေတာ အနှစ် (၂၀) ကျော်လာပါပြီ၊ ပြောင်းလဲစရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေကို ကျော်လွှားပြီး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့၊ ပဋိပက္ခ အသွင်ဆောင်တဲ့ အမြင် သဘောထားတွေကို ရှောင်ကြမယ်လို့ ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွဲပြီး ထုတ်ပြန်တဲ့ သဘောထာ းကြေညာချက်မှာ ပါခဲ့ပါတယ်၊ နှစ်နဲ့ချီပြီး ကျမတို့ လှုပ်ရှားခဲ့တာကြောင့် လုပ်ဖို့က ပြောသလောက် မလွယ်ဘူး ဆိုတာလဲ သိပါတယ်။ ကျမကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အဆင်ပြေရေးကို ဦးတည်ပြီး အမြဲပြောဆို လုပ်ကိုင် သွားမှာပါလို့ ` လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုင်းရင်းသူ တဦးရဲ့ အမေးကို ကတိပေး ဖြေကြား လိုက်ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ ကနေဒါနိုင်ငံက ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်ဌေးယဉ်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အင်ဒီယားနားက ဦးမျိုးမြင့်၊ ဗာဂျီးနီးယားက မသဇင်တို့ အပြင် မြစ်ကြီးနားက မဆိုင်းမိုင်၊ ရန်ကုန်က မငြိမ်းနဲ့ လန်ဒန်မြို့က ကိုခိုင်လင်းတို့် (၆) ဦးက သမ္မတ ဦးသိန်စိန်နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေ အိမ်ပြန်နိုင်ရေး ကိစ္စ၊ အကြောက်တရားနဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ အလားအလာတွေ မေးမြန်းထားတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြား ထားပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
ဒီအပတ် လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်မှာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွေအပေါ် သောတရှင်တဦးက မေးမြန်းခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဖြေစကားကို ခုလိုကြားရမှာပါ။ “ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်းပဲ အများ ပြည်သူအတွက် အကျိုးရှိစေဖို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အစပဲ ဆိုပေမယ့် ကောင်းသော စခြင်းလို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်” ဂျပန်၊ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကနေဒါနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက သောတရှင် (၆) ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဖြေဆိုစကားတွေကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
“ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေဟာ အင်မတန်မှ ချစ်ဖို့ကောင်းသလို ဉာဏ်ရည်လည်း ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ရည်ကိုင်ရည် တန်ဖိုးတွေကို အများသိစေရမယ် ဆိုတဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်နဲ့ ဘဝကို ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ ကိုယ့်အပေါ်မှာ ညီရင်းအကိုလို စိတ်ဓာတ်မျိုး မထားတဲ့ သူတွေကို စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုနဲ့ တုံ့ပြန်ပါ၊ အခု အစီအစဉ်ကို နားထောင်နေတဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေကိုလဲ မှာပါရစေ ကျမတို့တတွေ အေးချမ်း သာယာတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး အတွင်းမှာ လုံလုံခြုံခြုံ နေချင်ရင် အချင်းချင်း လေးစားဖို့က အဓိက ကျပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်ကို ပေါင်းပြီးတော့ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို ချစ်ခင် တန်ဖိုးထားကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ ချင်ပါတယ်` လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းလိုက် ပါတယ်"
ဒီတပတ်မှာတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ထီလင်းမြို့က ချင်းတိုင်းရင်းသား ဦးရှိန်းလောဟာ၊ ရန်ကုန်မြို့က ကိုကျော်စွာထူး၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ကိုအောင်ဇင်၊ ကိုခင်ဇော်နဲ့ ကိုနေမျိုး၊ မလေးရှားက ကိုဇော်စိုင်းတို့ သောတရှင် (၆) ဦးက ရှစ်လေးလုံး လူထုအုံကြွမှု ဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေ၊ NLDရဲ့ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှု ရှေ့လမ်းစဉ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေ အနှိမ်ခံရတဲ့ ကိစ္စ စသဖြင့် မေးမြန်း ထားတာတွေကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြား ထားပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
“ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အတွက် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် ခိုင်မာသူ အားလုံးနည်းတူ ကျမလည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ပြဿနာတွေကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာကို သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေထံ ပေးပို့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်များနဲ့ ပတ်သက်လို့ UNHCR က ကြိုးစားပြီး တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ပေးဖို့ အလှူရှင်နိုင်ငံတွေကို မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သောတရှင်တဦး အမေးကို ဖြေဆိုပါတယ်။
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက မခင်မိုးမိုး၊ လန်ဒန်မြို့က မသူဇာနိုင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုဝေဖြိုး၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကိုကျော်ဝင်း၊ ကိုဝင်းထိန်ဦးနဲ့ ကိုဂမ်ဆမ်တို့ ၆ ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
“ဒီပဲရင်းတုန်းက ပြတင်းပေါက်တွေကို ရိုက်ခွဲလို့ မှန်စတွေ စဉ်တာကလွဲလို့ တခြားထိခိုက်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ ရေဦးမှာ ကျမတို့ကားကို ဖမ်းဆီးပြီးတော့ နောက်တနေ့ မနက် အင်းစိန်ထောင်ကို ခေါ်သွားတာ လမ်းခရီးက (၂၄) နာရီလောက် ကြာပါတယ်။ အင်းစိန်မှာ (၃) ပတ် နေပြီးတော့ ရဲမွန်တပ်မြို့မှာ (၃) လကျော် နေခဲ့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဆေးရုံတက်ပြီးတဲ့ အခါကျတော့ အိမ်မှာ ပြန်ပြီးတော့ အကျယ်ချုပ်နဲ့ထားတာ အရင်နှစ် ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ အထိပါပဲ” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပြထားပါတယ်။
ပြည်မြို့က ကိုပီတာ၊ ကျောက်ကြီးမြို့က ကိုသုတ၊ ဘိုကလေးက လယ်သမားဦးဆန်းမြင့်၊ ကလေးမြို့က မအဲလေးတို့ အပြင် မလေးရှားက ကိုအောင်ကိုကို၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံက နန့်ရှားဖေါင်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံက ကိုမြတ်ထူးတို့ (၇) ဦးရဲ့ မေးမြန်းချက်တွေကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြား ထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ “အခုတက်တဲ့ အစိုးရက မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာကို အရင်အစိုးရနဲ့ မတူကြောင်း စစ်အုပ်ချုပ်မှုပုံစံနဲ့ ကွဲပြားကြောင်း ပြချင်နေကြတာ ဖြစ်လို့ ဒီလို အများပြည်သူ လိုလားတောင့်တနေတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးကိစ္စကို အတိုင်းအတာတခုထိတော့ ကိုင်တွယ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ……အန်တီတို့လည်း အရင်က အဖြစ်အပျက်တွေကို သတိရ ဆင်ခြင်ပြီး၊ ခု အပြောင်းအလဲတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိ တကယ့် အပြောင်းအလဲလည်း ဘယ့်လောက်ထိ တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုနိုင်မလဲဆိုတာကို ဂရုတစိုက် လေ့လာနေပါတယ်၊ အဆိုးမြင် သက်သက် မဟုတ်ပေမယ့် သတိကတော့ လွန်ကဲတယ်ရယ်လို့ မရှိနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်” ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မစန္ဒာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံက နော်ဟေမာန် ၊ တောင်ကိုရီးယားက ကိုမောင်မောင်လွင် ၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုရဲငြိမ်း၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက မင်းခေတ်ရာမွန်၊ ရန်ကုန်မြို့က မအေးအေးကိုနဲ့ ကလေးမြို့က ဒေါ်မေလှတို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
“နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဆိုင်ချင်သည်ဖြစ်စေ မဆိုင်ချင်သည်ဖြစ်စေ နိုင်ငံသူနိုင်ငံံသား အားလုံးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်၊ အလွယ်ဆုံးပြောရရင် နိုင်ငံတနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးက နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်နွှယ်နေတယ် မဟုတ်ဘူးလား။ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ ဘဝပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှင်းလင်း ဖြေဆိုထားပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့က မလဲ့လဲ့ဝင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံက မသက်သက်ဦး၊ ကိုလှနိုင်နဲ့ ကိုအောင်လွင်ထက်၊ နယူးဇီလန်က ကိုမောင်သိန်းနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက မလေးလေး၊ ကိုရဲမင်းထက်တို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
“NLD နဲ့ ကျွန်မက မူအရ မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်လို Burma လို့ပဲ ပြောပါတယ်။ မူအရလို့ ဆိုရတာကတော့ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အမည်ကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ပြောင်းပြီး ခေါ်တဲ့ ကိစ္စဆိုတာ ပြည်သူများရဲ့ ဆန္ဒကို မရယူပဲ လုပ်သင့်တဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နဝတက မိမိတို့ ဆန္ဒတခုတည်းနဲ့သာ ပြောင်းပြီး ခေါ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်လို Myanmar ဆိုတာကို ကျွန်မတို့ လက်မခံတာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားက မနီလာစိန်နဲ့ ကိုထွန်းထွန်းဦး၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုမိုက်ကယ်၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ကင်မုချောလ်နဲ့ မဥမ္မာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်က ကိုမောင်ဇော်တို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည်ဖြေဆိုထားပါတယ်။
"လွတ်မဲ့ အကျဉ်းသား တသောင်းကျော်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားက ၄၀ တောင် မပြည့်ဘူးလို့ ကြားရပါတယ်။ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာ အခုအထိ အသေအချာ လွတ်လာတဲ့ ၂,၀၉၆ ယောက်ထဲမှာတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားက ၉ ယောက်တည်း ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ အန်တီတို့ လိုချင်တဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခု အစိုးရသစ်က တကယ်ပဲ ဒီမိုကရေစီ လိုလားမှု ရှိမရှိဆိုတာကလည်း စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုး လှုပ်ရှားမှုကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးပြီးတော့ လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။"
" ဒီမိုကရေစီမူအရ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ဆန္ဒ ကိုယ်ရှိတာကို လက်ခံသလို ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အရ အများစုရဲ့ လူနည်းစုက လေးစား လိုက်နာရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ခမောက်ပုံကို အများပြည်သူက NLD နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး မြင်ကြတာမို့ NLD နဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့လမ်း ရွေးပြီး ဒီခမောက်တံဆိပ်ပဲ သုံးတာကတော့ ပြည်သူကို ဇဝေဇဝါဖြစ်စေလို့ မသင့်လျော်ဘူးလို့လည်း ယူဆပါတယ်"လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မေးခွန်းတွေကို ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံက ကိုထိန်လင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံက မစမ်းစမ်းသစ်နဲ့ ဦးလှိုင်အေး၊ မန္တလေးမြို့က မထွေးထွေး၊ ထိုင်းနိုင်ငံက ကိုသက်ခိုင်နဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံက ကိုချမ်းမြေ့တို့ ၆ ဦးရဲ့ မေးမြန်းချက်တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
`ဒီတခါ အကျယ်ချုပ်က လွတ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ အရင်အချိန်တွေကထက် အလွန်ကို ပိုပြီးတော့ များပြားလှတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေနဲ့ပဲ ပိနေပါတယ်၊ ရုံးနဲ့အိမ်နဲ့ အလုပ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ပဲ ရန်ကုန်တွင်းမှာ သွားလာနေရတာ အချိန်ပြည့်ပါပဲ။ လအနည်းငယ် ကြာရင်တော့ ခရီးထွက်ဖို့ စပြီးတော့ လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်’ လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းက NLD ပါတီဝင် ဦးခင်မြင့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိကြတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ချုပ်က အရှင်ဇဝန၊ စာရေးဆရာမ နှင်းပန်းအိမ်၊ မထူးထူးတို့နဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ကိုဂျွန်၊ ကိုဝိုင်းချစ်တို့ ၆ ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးရေး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ တပ်မတော်ကြား အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး ပြည်ပကို ရှောင်ခွာသွားရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ အခြား နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို လုံခြုံအေးချမ်းစွာ ပြန်လာနိုင်ရေး စသည်တို့ကို တောင်းဆိုထားတဲ့ လက်မှတ်ထိုး လှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရော နိုင်ငံသားတွေ မဟုတ်တဲ့သူတွေ၊ ပြင်ပက ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေ အားလုံးကပါ ဝိုင်းပြီးကူညီ ပေးစေချင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကတဆင့် လက်မှတ်တွေကို ပို့ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဥပဒေရေးရာ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင် ၉ ဦး ဖွဲ့စည်းလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တကယ်တမ်းကို တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုနိုင်မဲ့ အကြံတွေ ပေးနိုင်ပြီး ဒီအကြံတွေကို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက မှန်မှန်ကန်ကန် အကောင်ထည်ဖော်နိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ကောင်းမယ်လို့ ထင်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံက မဝေနှင်းပွင့်သုန်၊ အိန္ဒိယက ဒေါ်မြမြအေး ၊ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်က စောမြရာဇာလင်း ၊ ထိုင်းနိုင်ငံက ကိုရဲရင့်နိုင်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ကိုရန်နိုင်ထွန်း ကိုဇော်မိုးအောင်၊ ကိုကျော်စွာလင်းတို့ ၇ ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
“၁- ဒီပဲယင်းအဖြစ်အပျက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ ၂- အဲဒီဖြစ်စဉ်မှာ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့သူတွေကို ထိုက်သင့်တဲ့ နစ်နာကြေးပေးရန်။ ၃- နောင်အခါမှာ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး ထပ်မံ မဖြစ်ဖို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်။ ၄- ဒီပဲယင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အဖမ်းဆီးခံနေရသူတွေ အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် ဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဖက်ကတော့ မိမိတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အမျိုးသားညီလာခံ လွှတ်ဖို့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ ဒီအချက်အားလုံးကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်ခံပြီးမှ အမျိုးသားညီလာခံ စဖို့ ရက်အနည်းငယ်လေး အလိုမှာ အန်တီ့ကို မလွှတ်ပေးဘူး ပြောတာကစပြီး သဘောတူညီချက်တွေရော ဆွေးနွေးတာတွေရော ပျက်သွားပါတယ်” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဧပြီ ၂၉ အစီအစဉ်မှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်က စာရေးဆရာ သန်းဝင်းလှိုင်နဲ့ မလွင်လွင်မြင့်၊ မလေးရှားက ကိုဇော်ဌေး၊ စင်ကာပူက မကြေးမှုံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုဘုန်းလှိုင်၊ တောင်ကိုရီးယားက ဝိုင်မြင့်ချို၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မခိုင်သီတာအောင်တို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားထားပါတယ်။
အခု အစိုးရအဖွဲ့တခုရှိနေတာကို မရှိချင်ယောင် မဆောင်ပဲနဲ့ အဲဒီအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ရှေးရှုတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ရေးကိုပဲ ဦးတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် စပြီးပြောတာ၊ လုပ်တာနဲ့ အများပြည်သူ သိအောင်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ပါမယ်၊ အခုအချိန်မှာ ဘာမှ မပြောသေးတာကို နားလည် သည်းခံပေးစေချင်ပါတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဧပြီ ၂၂ အစီအစဉ်မှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မဧပရယ်မိုး၊ တောင်ကိုရီးယားက ဘုန်းတော်ကြီး လင်ယောင်တန်နဲ့ ကိုထွန်းဝင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံက မစိုးစန္ဒာ၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုကိုလတ်၊ သြစတြေးလျားနိုင်ငံက နိုင်ဖေသိမ်းဇာ၊ ထိုင်းနယ်စပ် နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းထဲက အရှင် ဦးဣန္ဒောဘာသတို့ရဲ့ မေးမြန်းချက်တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားထားပါတယ်။
အခု အစိုးရသစ်တခုရှိနေတယ်ဆိုတာကို အရှိအတိုင်းပဲ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်၊ ပြည်သူတွေနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိစေမဲ့ အစိုးရမျိုး ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုတော့ နည်းနည်းတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။ အမေရိကန်အစိုးရက မစ္စတာ ဒဲရစ် မစ်ချယ်ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်မဲ့ကိစ္စကိုလည်း ကျမတို့က ကြိုဆိုပါတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီတပတ် ဖြေကြားထားပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကိုလင်းအောင် ၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုအောင်မြတ်ဝင်း၊ မလေးရှားက ကိုဇော်မြင့်၊ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်က ဦးဆောဆ၊ ထိုင်းနိုင်ငံက မအားနန်နဲ့ ကိုသိန်းဝင်းတို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
အခုတလော နယ်စပ်မှာ စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေ ပြန်ပေါ်လာနေတယ် ဆိုတာ သိရလို့ အလွန်ပဲ စိုးရိမ် ပူပန်နေကြရပါတယ်။ ပြဿနာတွေကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းမှပဲ ရေရှည် ငြိမ်းချမ်းမှု ရနိုင်မှာပါ။ ဖြတ် ၄ ဖြတ်အစား မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ ဆိုတဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်တရား ၄ ပါးကိုသာ အဓိကျင့်သုံးရင်တော့ အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိမှာပါလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာနယ်စပ်က စောသီတာလင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံက မချယ်ရီဇာဟောင်းနဲ့ စောအဲ၊ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်က ဦးအောင်ဝါ၊ ဧရာဝတီတိုင်းက ကိုနိုင်နိုင်၊ မလေးရှားက မသင်းသင်းဌေးနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ကိုခင်မောင်ဝင်းတို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြားထားပါတယ်။
Hello! we are waiting to listen Question & Answer with Daw Su, Now July is nearly gone, thy not update it? you're stop it at 10 June & it was long time. Pls: update new one..... Thanks!